आधुनिक अंकेक्षण सेवाहरु
खाता प्रमाणित गर्न संगठनको प्रमुख लेखापाल छ, तर व्यावसायिकता को एक उच्च स्तर अडिट सेवाहरू प्रदान गर्नुहोस्। विशेष कम्पनीहरु को कर्मचारीहरु कागजात उद्यम संग सम्बन्धित सबै subtleties र nuances थाहा छ। समसामयिक प्रदर्शन अडिट ग्राहक गम्भीर आर्थिक परिणाम हासिल र कुनै पनि व्यापार परियोजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ। साथै, अडिट सेवाहरू हामीलाई कम्पनी को खुलापन र पारदर्शिता संभावित साझेदार र ग्राहकहरु लाई देखाउन अनुमति दिन्छ। स्वतन्त्र राय सामान र सेवाहरू को बजार मा उद्यम स्थिति बढाउँछ। व्यवसायी पूर्ण गोपनीयता काम र केवल खातामा ग्राहक को चासो लिइरहेको।
हाल, लेखापरीक्षण सेवाहरू कम्पनीको कागजात संग लेनदेनको सूची समावेश गर्नुहोस्। यो लेखा, यसको पुनर्स्थापना, आवश्यक भएमा, वित्तीय विश्लेषण, उद्यम व्यवस्थापनको दक्षता को मूल्यांकन को परीक्षण छ। को लेखापरीक्षक कम्पनी, गर्ने स्वामित्व वा कुनै महत्त्व को विशेष प्रदर्शन सुधार सिफारिसहरू बनाउन सक्छ।
ग्राहक जाँच बलियो जो एक निष्कर्षमा, प्राप्त गरेपछि प्रतियोगिता वातावरण मा कम्पनीको प्रतिष्ठा सम्भव सार्वजनिक शरीर आँखा मा एक विश्वसनीय उद्यम को स्थिति प्राप्त गर्न बनाउँछ। अडिट सेवाहरू छ कि मुख्य फाइदा - विवाद, जरिवाना र सजाय अडिट नियामक शरीर समयमा उत्पन्न गर्न सक्छ भन्ने रोक्न सक्ने क्षमता।
को लेखा 'प्रबन्धक आधारित लाभ वितरण को सर्वोत्कृष्ट विधि चयन गर्न द्रुत कर कानुनको उल्लंघन बिना कागजातमा कमी को समसामयिक सुधार को लागि उपाय लिन सक्नेछन्। यो कि ब्यालेन्स सामान्य छ बाहिर जान्छ भने पनि, जे भए पनि अडिट सेवाहरू लाभदायक हुनेछ। वित्तीय स्थिति मा लेखापरीक्षक रिपोर्टमा उपस्थिति आफ्नो पक्षमा लगानीकर्ताले र साझेदार द्वारा निर्णय बनाउने असर गर्न सक्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न - सही गणना र कर को भुक्तानी, एक कहिल्यै-परिवर्तन कर व्यवस्था विशेष महत्त्वपूर्ण छ। कर भुक्तानी गलत र असामयिक गणना लागि पेनाल्टी एकदम उच्च हो। त्यसैले, हालका लाभ कर अडिट मा लोकप्रियता धेरै। यो लेखा र कराधान को स्थिति, साथै अनिवार्य भुक्तानी लागि संगठन को गणना को एक उद्देश्य प्रमाणिकरण छ।
नियम, कर अडिट उद्यमी परीक्षण को पूर्वसन्ध्या मा बाहिर छ। हरेक तीन वर्ष कानून दृढ वृत्तचित्र चेक अनुसार कम्तिमा एक पटक बाहिर छ। विशेष कम्पनीहरु अक्सर कर जोखिम नियामक अधिकारीहरु चेक को कार्यान्वयन समयमा सामान्यतया उत्पन्न कि कम रुचि कम्पनीहरु द्वारा नजिक छन्।
कर अडिट conversely, उच्च गति मा सानो रकम, कर अनुकूलन योजनाहरु, प्रयोग यसको आफ्नै लेखा प्रणाली निर्माण, संगठन अव्यावहारिक उच्च कर र शुल्क तिर्ने छ भने आवश्यक छ, वा। अडिट को मुख्य उद्देश्य -, राज्य शरीर को विधि द्वारा कर आधार र घोषणा जाँच त्रुटिहरू पहिचान र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सिफारिसहरू विकास गर्न।
कर अडिट प्रदर्शन, विशेषज्ञहरु ध्यान उद्यम को रेकर्ड जाँच्न, सही दोष, रिपोर्टिङ मा परिवर्तन मा सल्लाह दिन। यो पैसा बचत हुनेछ। यस मामला मा, को लेखा लिन आफ्नो कार्यहरू लागि जिम्मेवारी संगठन अनुसार सिफारिसहरू संग प्रमाणिकरण र त्रुटिहरू को समसामयिक सुधार को लागि प्रस्तुत कागजात को प्रामाणिकता सुनिश्चित गर्दछ कि प्रदान।
कर अडिट आफ्नो मुख्य परिणाम उद्यम कर जोखिम न्यूनीकरण छ। अडिट दिइएको अवधि मा कर आधार को गणना को शुद्धता मा एक राय जारी। साथै, समर्थन नियामक एजेन्सीहरू निरीक्षण द्वारा प्रदान र विवाद को बन्दोबस्त भाग छ।
मिति गर्न, कर अडिट अडिट सेवाहरूको सर्वाधिक लोकप्रिय प्रकार को छ।
प्रसूति बिदा र परेशानी यसको डिजाइन सम्बन्धित
क्रेडिट र आय को प्रणाली सुधार
एक सूची लगानी कसरी बनाउने
लेखा 76 स्कोर: ब्यालेन्स, क्रेडिट, डेबिट, तार
राज्य कर को फिर्ती कस्तो छ
खाता 02 02. खाता 02 - "मूल्यह्रास"
Leningrad क्षेत्र मा माथिल्लो मंड्रोग: बाँकीको तस्वीर र समीक्षा
कार मैकलारेन 650S को प्राविधिक विशेषताहरु
अभ्यास दृष्टि सुधार गर्न। म सबै कुरा हेर्न चाहन्छन्!
आफ्नै हातले चूहादान - प्रभावकारी र सजिलै!
सिउँडी, छेपारो र कछुवा को उदाहरण को मिलाइएको को सापेक्षिक प्रकृति
कसरी वन आकर्षित गर्न। हामी प्रकृति जोगाउन छोराछोरीलाई सिकाउन
क्रिमीआ, नदी: समीक्षा र पर्यटक फोटो
रातो ब्यानर को आदेश: इतिहास पुरस्कार
आटा मा एक सॉसेज कसरी गर्ने? आटामा ससुर बनाउने: घरको व्यंजनहरू
Svetlana Mironov - रूसी Biathlon भविष्य
वजन "Dietressa" गुमाउनुपर्ने लागि पूरक: समीक्षा, संरचना र कार्य को संयन्त्र
स्वास्थ्य शिविर "" मिरर